युट्युव चलाएर कुखुरा पाल्दै चलाउने ! – Satyapati
युट्युव चलाएर कुखुरा पाल्दै चलाउने !
विजय मल्ल । बाँके । प्रविधीमा आएको विकाससगैं यसले हाम्रो जीवन सहज र सरल बनाएको छ । हाम्रो जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रविधीले जसरी हाम्रा दिनहुँ दिनचर्यालाई सहज र सरल बनाएको छ, त्यसरी नै यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव उस्तै छ ।
यदि तपाई इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पक्कै तपाई सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युवमा घण्टौं झुण्डिनुहुन्छ । साथीभाईसँग कुराकानी गर्ने, नयाँ कुरा र जानकारीलाई पोष्ट, शेयर, कमेन्ट र लाइक गर्ने कार्यमा नै बढि व्यस्त रहनुहुन्छ ।
यसो हो भने आफ्नो बुझाई र सोँच परिर्वतन गर्नुहोस् । यसबाट पनि ज्ञानगुणका कुरासँगै आफ्नो क्षमतालाई प्रष्फुटन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बाँके डुडुवा गाँउपालिका वडा नं. ९ कम्दीस्थित छग्रहवाका नारायण चलाउनेले दिएका छन् ।
नेपालगन्जस्थित जिभिएन कलेजमा दश जोड दुईमा अध्ययनरत १९ वर्षीय चलाउने सानै उमेरदेखि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोँच राखेर सामाजिक सञ्जालमा भन्दा युट्युवमा घोत्लिने गर्दथे । युट्युवमा नयाँनयाँ कुरा खोजेर अध्ययन गर्ने चलाउने युट्युवबाटै प्रभावित भएर आधुनिक प्रविधीयुक्त कुखुरापालनमा अघि सरे ।
‘कलेजबाट फर्केपछि मोबाइलमा युट्युव चलाउँछु,’ चलाउनेले भने, ‘प्रविधीलाई चलाउन जान्ने हो भने धेरै ज्ञान सिक्न पाइने रहेछ । प्रविधीले नै मलाई कृषिकर्ममा लाग्ने प्रेरणा दियो ।’ इच्छा शक्ति भए आफ्नै गाँउघरमै केही गर्न सकिने उनको विश्वास छ । आफुसँगैका थुप्रै साथीहरु कोही रोजगारीका लागि नेपालभित्र, भारत र अन्य देश गए । कोही विहेबारी गरे ।
साथीहरु रोजगारीका लागि घरगाँउ नै छाडेर जाँदा स्वदेशमै आफुले केही गरेर बस्ने अठोट गरेर कुखुरापालन सुरु गरेको उनले बताए । उनले छग्रहवामा आफ्नै दुई कठ्ठा जमिनमा आधुनिक कुखुराको खोर बनाइरहेका छन् । साढे ५ हजार कुखुरा पाल्न सकिने खोरमा पहिलो चरणमा ५ हजार कुखुरा पाल्ने उनको योजना छ ।
‘कुखुरा पाल्न कुनै खास सीप सिकेको छैन, युट्युव हेरेर सबै जानकारी लिएको हुँ,’ उनले भने । युट्युवमा कुखुरापालन गर्ने तरिका हेरेपछि त्यसबाट प्रभावित भएका चलाउनेले खोर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । उनले निर्माण गर्न लागेको खोर पनि अन्य खोरको तुलनामा भिन्न छ ।
बाहिरी वातावरण जस्तोसुकै भए पनि भित्र सँधै एकै प्रकारको वातावरण हुने खोर निर्माण गर्दैछन्, जसका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका पंखाहरु र मौसम नियन्त्रण गर्ने मेशिनहरु जडान गर्दैछन् । यसअघि पनि सामान्यरुपमा कुखुरापालन गरे उनले राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि न्यू बाँके पोल्ट्री फर्म दर्ता गरी व्यवसायीकरुपमा कुखुरापालनमा लागेको बताए ।
आफ्नो पोल्ट्री फर्मबाट उत्पादन गरेर बाँके जिल्लामै कुखुरा खपत गर्ने उनको योजना छ । रु.१० लाख लगानीमा निर्माण भइरहेको खोरको कार्य माघ मसान्तसम्म सकिने र फागुन पहिलो सातादेखि कुखुराका चल्ला राख्ने योजना बनाएका चलाउने कुखुराका लागि मौसम प्रतिकुल भइरहने बाँके जिल्लामा आफूले बनाउन लागेको जस्तै आधुनिक शैलीको खोर प्रभावकारी हुने बताए ।’
किसान परिवारका उनी चार भाईमध्ये कान्छा छोरा हुन् । ‘अगाडी सबै दाईहरु विवाहित हुनुहुन्छ, आ–आफ्नो ब्यवसाय गर्नुहुन्छ । मैले पनि केही गर्ने अठोट लिए अघि बढिरहेको छु,’ चलाउनेले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘मेहेनत गरेपछि सफल भइन्छ । यसमा म दृढ छु ।’ आफूले गर्न लागेको कार्यमा लगनशील भएर अघि बढे सफल हुनेमा उनको विश्वास छ ।
कुखुरापालन व्यवसाय गर्नका लागि बुवाले सघाइरहेको उनले बताए । ‘छोराले केही गर्छु भनेर अघि बढेपछि साथ र सहयोग गरिरहेको छु । छोराले राम्रै मेहनत गरिरहेको छ । छोराको मेहेनत देखेर व्यवसाय राम्रै हुने विश्वास गरेको छु,’ बुवा भीमबहादुरको भनाई छ । उनले जस्तै रोजगारीमा भौतारिरहेका युवाका लागि उदाहरणीय पाठ हो ।